प्रविष्टि (सामाग्रीहरूको तालिका)
सामाग्रीहरूको तालिकामा प्रविष्टिको ढाँचा निश्चित गर्नुहोस्.
रोज्नुहोस्घुसाउनुहोस् - अनुक्रमणिका र तालिकाहरू - अनुक्रमणिका र तालिकाहरू - प्रविष्टिहरू ट्याब (जब तालिकाको सामाग्रीहरू चयन प्रकार हो)
बनावट र ढाँचा गर्दा
बनावट लाइनबाट सङ्केत मेट्न, सङ्केत क्लिक गर्नुहोस्, र त्यसपछि मेट्नुहोस् कुञ्जी थिच्नुहोस् ।
सङ्केत बदल गर्नका लागि बनावट पङ्क्तिबाट, सङ्केत क्लिक गर्नुहोस्, र मेटाउने कुञ्जी थिच्नुहोस्.
सङ्केत थप गर्नका लागि बनावट पङ्क्तिबाट, खाली बाकसमा क्लिक गर्नुहोस्, र सङ्केत बटन क्लिक गर्नुहोस्, तलका सङ्केतहरू उपलब्ध छन्
अध्याय सङ्ख्या (E#)
अनुच्छेदको शीर्षकको पाठ घुसाउनुहोस्.
ट्याब रोक्नुहोस् (T)
पृष्ठ सङ्ख्या (#)
प्रविष्टको पृष्ठ सङ्ख्या घुसाउनुहोस्.
हाइपरलिङ्क (LS र LE)
संरचना लाइनमा चयन गरिएको भागका लागि ढाँचा शैली निर्दिष्ट गर्नुहोस्।
संवाद खोल्नुहोस् जहाँ तपाईँं चयन गरिएको क्यारेक्टर शैली सम्पादन गर्न सक्नुहुन्छ.
ट्याब लिडर चयन गर्नुहोस् जुन तपाईँं प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ.
ट्याब रोक अवस्था
बायाँ पृष्ठ सीमान्त र ट्याब रोक बीच दूरी छोड्नका लागि प्रविष्ट गर्नुहोस्.
दायाँ पृष्ठ सीमान्तमा ट्याब रोक पङ्क्तिबद्व गर्नुहोस्.
अनुच्छेद शैली इन्डेन्ट सँग सम्बन्धित ट्याब अवस्था
Title is: प्रविष्टि (सामाग्रीहरूको तालिका)